Anyị nyochaa Samsung Galaxy S6 ihu | Gam akporosis
Samsung Galaxy S6 ihu, na Samsung ekwentị ga-maa-ewetara omume ọma na uru na onye pụrụ ime ihe nile Korea na-emeputa nyere anyị n'afọ ndị mbụ nke gam akporo, yana na n'afọ ndị na-adịbeghị anya achọtala onwe ya na mbipụta ndị gara aga nke usoro S ndị a hapụrụ na mmiri mmiri.
Anyị nwere ya ebe a n'aka anyị ma Anyị na-agbazinye onwe anyị iji nyochaa ma nyefee mmetụta nke onye kwesiri ịlaghachi na Samsung, ọ bụ ezie na ọ ka bụ otu n'ime ndị nrụpụta kachasị ike nke oge a. Ma ọ bụ na Galaxy S6 anyị nwere olile anya na ọ ga-abọ ọbọ na plastik ahụ na mmetụta ahụ na ọ bụ n'oge na-adịghị anya mgbe ọ rutere ihe mgbaru ọsọ ma nyefee ya dị ka mmeri. Ekwentị na-akwado iko ahụ na azụ ma jiri ihu igwe mara, na nsụgharị a, yana igwefoto nke na-enye anyị mmetụta kachasị mma maka foto. Ha niile zuo oke ugbu a, mana ị nwere ntụpọ ọ bụla ma ọ bụ ihe ị ga-ata ụta? Ee, n'ezie ọ dị.
1 A elu-ọgwụgwụ nke ezigbo ndị
2.1 Ihu agbaziri agbaa
2.4 Atụmatụ Edge
2.5 Obere nkọwa
6 Ihe Nlere Igwefoto
6.1 Ndị dị n'elu
6.3 Nhọrọ na-elekwasị anya
6.4 Foto Macro
6.6 Ọnọdụ dị ala
7 Ihe ndekọ vidiyo
7.1 Ihe ndekọ vidiyo 1080p 60FPS
A elu-ọgwụgwụ nke ezigbo ndị
Na igwefoto ahụ dị egwu nke fọrọ nke nta ka anyị nwee mmetụta nke inwe nnukwu ngwaọrụ iji were foto nke ihe niile gbara anyị gburugburu, ihe niile na-adịkarị nke zuru oke ma na-amụmụ ọnụ ọchị na ihu anyị mgbe anyị nwere ọilyụ na ngwaọrụ a dị n'aka anyị. Bịanụ, anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla iji gosi onye nche ọnụ ụzọ ahụ igosi ya njiri mara nke onwe ma ọ bụ etu o si nwee ike ịse ọtụtụ foto na jiffy.
All na-amụmụ ọnụ ọchị na ha niile bụ ọysụ ruo mgbe, otu awa gachara igwefoto iji jide ụwa gbara anyị gburugburu, Anyị na-ele batrị batrị ma anyị na-enwe mmechuihu mbụ, na bụ na, dị ka ị maraworị, ọhụrụ Galaxy S6 na-ata ahụhụ na nke a.
Ọ na-ata ahụhụ n'ihi anyị ga-eji igwefoto gị ọtụtụ. A ga-ahapụ anyị iji iji njiri mara mma iji mara ozi ọma na ihu igwe na ihu site na ngebichi ahụ, mana na njedebe anyị ga-atụfu n'ihi na batrị batrị ahụ, n'ezie anyị ga-ahọrọ ya ka ọ rute anyị ụbọchị na see foto ndi ozo.
Anyị lere nkọwa batrị anya, anyị bụ n'ihu a oké ama na-akpọrọ ọtụtụ omume ọma na nke ahụ bụ n'ezie ihe kasị mma gam akporo ngwaọrụ nke oge. Samsung achọpụtala isi na nhazi ma ndị ọzọ na-abịa n'onwe ya.
Afọ a dị oke mkpa maka Samsung n'ihi na ọhụrụ a Galaxy S6 ga-apụta a tupu na mgbe maka S usoro mgbe afọ ole na ole gasị nke ha nọ na-edegharị atụmatụ nke S3 na-ewetaghị isi akụkọ.
Nke a arụwo ọrụ nke ọma natara ọtụtụ nkatọ site n'akụkụ niileMa ọ bụ ndị gam akporo obodo na-achọsi ike ịhụ Samsung dị elu na njedebe ọzọ bụ ihe Galaxy S2 bụ, yana site na mgbasa ozi, ike gwụrụ na-eche mgbe niile maka nnukwu mgbanwe na imewe dịka ee ọ dị ka afọ a ọ dịla.
N'ikpeazụ anyị nwere ike ikwu nke ahụ anyị na-eche ihu Galaxy S6 dị iche na mbipụta ndị gara aga na na oge anyị nwere ya n'aka anyị anyị tufuo ndị plastic sensations na ọ nyere anyị maka oge ikpeazụ Galaxy S5 afọ gara aga
Ihe anyị na-atụghị anya na ọ bụ mmetụta ahụ nke inwe ezigbo njedebe a adịchaghị imewe na na iko na azụ na na ihu ihuenyo, na nke a, nke na-eduga anyị na smartphone pụrụ iche.
Ọ bụrụ na anyị tinye na nke a igwefoto ahụ na-ahapụ anyị obi ụtọ nke ịse foto niile na-aga n'ihu anyị, na ihuenyo ahụ na-agbagọ agbagọ nke Galaxy S6 na-enye anyị na nsụgharị ya, anyị enweghị ike ịme ihe ọ bụla ma na-ekele Samsung. Ha nwere ike nọrọ ọdụ n'oge mbipụta atọ nke na-ekwekọghị na ụdị ewu ewu na ihe ọ pụtara maka gam akporo, ebe ọ bụ na anyị ji ọtụtụ ndị ọrụ a ụgwọ.
Nkọwa nke inwe ama nwere nkwupụta ihu na ụfọdụ atụmatụ na-agbakwunye ịmecha njedebe ịbụ nnukwu ekwentị nke anyị nwere ike ịta ụta batrị ebe anyị nwere ike ịnweta agba site na Samsung na ọnụahịa ya dị elu.
Ihu agbaziri agbaa
Ihuenyo a na-atụgharị anya na mbipute ahụ bara uru ịkọ maka ịnwe ya n'akụkụ ọ bụla nke ọnụ, nke ọdịiche ya na ekwentị ndị ọzọ karịa nke zuru ezu ewezuga ụdị ewepụlitere nke Galaxy Note 4.
Otu ọghọm bụ na anyị nwere ike ọ gaghị ama jidere ekwentị n'akụkụ gị ntakịrị na-amị amị mgbe ị na-agbanye n'ime iko nke ihuenyo curved. N'ihi akụkụ anọ nke akụkụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịchọ ụbọchị ole na ole iji mee ka ihuenyo ahụ gbagọrọ agbagọ.
Naanị ihe nke ahụ bụ Ọ na-adị mma mgbe anyị nwere ekwentị n'aka anyị na nke a bụ mgbe ọ ga-adọta mmasị kachasị na anya ndị enyi ma ọ bụ ndị dị nso.
Iko dị n’azụ pụtara, nke ahụ Anyị na-echefu na rọba ahụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ ahụ dị ka ọ ga-agbanahụ site na aka anyi n'oge ufodu. Ewezuga mgbanwe mgbanwe n’echiche a nke na-enye ya ọnụnọ ọzọ na nkọwa ndị ọzọ nwere ọtụtụ nkọwapụta na-eduga n’ọgwụgwụ dị ukwuu site n’akụkụ ọ bụla nke ị na-ele ya.
Pụtara nke inwe ama na-efu ego gị mana nke ahụ na-anakọta ngwa ngwa ya site na mmetụta na iche na ọ dị tupu ama ama. A na-ahụkwa nhazi a n'ihu na mgbe anyị na-ele curved n'akụkụ, ọnụ bụ na ọ na-anọpụ iche site na ndị ọzọ na ya.
ya mere ee otu n'ime ọchịchọ miri emi mgbe ị gara ịzụta Galaxy S6 bụ na ọ bụ ebe etiti anya, a ga-emezu ya ngwa ngwa. Ọ bụ ihe ọzọ nke nkọwa ya na ọnụahịa dị elu nwere ya.
Anyị bịarutere na akara aka nke Galaxy S6 a. Anyị nwere ike ikwu otu ihe ahụ maka ihuenyo ma ọ bụ imewe, mana igwefoto bụ ihe obi ụtọ. Ọ bụ ihe ọzọ na ndị ahụ na-esote usoro a na-ebupụta site na Nkọwa 4 maka ama ama dị ugbu a na iPhone n'echiche a ma na-ewe foto nke oke mma.
Ma ọ bụ n'okpuru ọkụ dị ala, abalị ma ọ bụ ọnọdụ nnukwu foto, igwefoto Galaxy S6 bu ihe ngosi di egwu. Bịa, na ihe na-erughị oke ọkpa ọkịrị ị ga-eji ezigbo oge were ụdị foto niile na-ejuputa ebe nchekwa dị n'ime ya na ọnụọgụ dị ukwuu nke njide.
Vidio ahụ na-enyekwa otu ihe ahụ Ma ọ bụrụ na anyị abanyeworị na ngwa dịka nke Microsoft tinyere na Hyperlapse, nsonaazụ ya dị oke mma.
Na ihu ihuenyo anyị nwere nweta ọtụtụ atụmatụ iji hazie ngwaọrụ ahụ iji gbanye ọkụ mgbe anatara oku ma ọ bụ nkwupụta, lelee ozi ezighi ezi sitere na kọntaktị dị mkpa, lelee isi mmalite metụtara ọdịmma gị, ma ọ bụ gosipụta elekere mgbe ihu ụlọ na-apụ.
Featuresfọdụ atụmatụ atụmatụ nke nwere ike ịba uru maka oge ụfọdụ na nke ahụ na-enye ya mmetụ "dị jụụ" mgbe anyị na-amụta iji ha eme ihe, ebe ọ bụ na mbụ anyị ga-efu ụzọ ntakịrị. Ihe m hụrụ bara ezigbo uru bụ ịnweta ngwa ngwa kọntaktị dị mkpa site na ịpụ site n'elu aka nri.
Ihu ihuenyo na n'ezie anyị ga-akwụ ụgwọ karịa iji ya ma ọ bụrụ na ike batrị ka ukwuu, n’ihi na ọ na-eme ka anyị chee na anyị na-emefusị ya maka abamuru nke ihe anyị nwere na ọkwa ngosi.
Anyị ka nwere S Ahụike dịka ngwaọrụ maka ahụike nke ahụ ka dị ebe ahụ na-enye ihe niile, mgbe ahụ ihe mmetụta mkpịsị aka dị mkpa na ngwaọrụ nke ụdị a na ihe ijuanya nke nwere Microsoft n'ụgbọ nwere ngwa dị iche iche dịka OneNote.
Otu n'ime nkọwa ndị ahụ nwere ike ịba uru bụ iwepu ngwa na-abịa na ndabara na sistemụ.
Arụ ọrụ na-anọgide na par na ọtụtụ elu-ọgwụgwụ ihe na ekwentị. Otu interface na-agagharị nke ọma na maka gị nke ejiri Samsung, ị ga-amaworị ihe Touchwiz dị.
A arụmọrụ na n'ezie ọ ga-emeziwanye ogo dị elu ma ọ bụrụ na anyị nwere ụdị ndabara nke gam akporo Lollipop, na eziokwu aesthetically juru na a otutu. Ya mere mmetụta na-anọgide na ọ ga-abụ S6 na Dị ọcha gam akporo Lollipop.
Ọ bụghị n'ihi na m na-ekwu na Touchwiz malfunctions ma ọ bụ na-akatọ ya, mana n'ihi arụmọrụ dị egwu nke Galaxy S6 na ndị 3 GB nke RAM na octa-core chip, ị nwere ọchịchọ ahụ ịchọrọ ịnwale Lollipop site na ngwaike a nwere oke njirimara.
Anyị bịara na trauma nke trauma na Galaxy S6. Ka ahụ, Ee, ọ na-agbaso ihe a na-ahụ na ekwentị ndị ọzọ, Ma gịnị na-eme? Ọfọn, anyị nwere ama na anyị ga-eji ọtụtụ. Naanị igwefoto, oge dị mma, ihe dị ka nkeji 40 ọ ga-a 30ụ 40-XNUMX% nke batrị ahụ.
N'ụzọ ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na anyị esoro ndị enyi gaa oriri ma ọ bụ maa ụlọikwuu, oge anyị na-eji igwefoto, WhatsApp, netwọkụ mmekọrịta na egwuregwu vidio dị egwu, na mberede anyị ga-enwe mmetụta na enweghị batrị na ajụjụ ndị na-ebilite banyere ihe kpatara na ha ejikọtaghị otu ike ka ukwuu. Ma ebe a ka iwe na umengwụ batara na obere. Ha bụ 849 XNUMX nke Samsung smartphone.
Ok anyi ga anata very soon na mbipute gbakwunyere, ma maka ndị mefuru ego ahụ na enweghị ike ịgbanwe batrị ahụ bụ nkụda mmụọ.
Anyị nwere ọtụtụ ọrụ anyị nwere na S5 n'onwe ya Ọnọdụ HDR, nnukwu, ilekwasị anya na nhọrọ, panorama na ụdị àgwà niile iji kpalie oge kachasị mma n'oge ọkọchị site na oghere igwefoto nke Galaxy S6.
una Igwefoto 16 MP n'azụ na-ese foto na 2988 x 5312 mkpebi, optical image stabilization, autofocus, HDR auto, panorama, nchọpụta ihu na nlebara anya na ntuziaka. Na ndekọ vidiyo, ọ na-edekọ na 60FPS na 1080p, nke, dịka ị pụrụ ịhụ na ihe atụ igwefoto, na-enye mma dị elu. Ka anyị ghara ichefu banyere 2160p mkpebi na 30FPS, 720p na 120FPS, HDR ma ọ bụ sọrọ-video.
Ihu ya bu ọzọ nke obere omume ọma ya na 5 MP na oke mma iji kacha mma selfies. Ọ na-edekọ na 1440p 30FPS ma nwee akpaaka HDR. Gosipụta ọnọdụ ọ nwere akpaka iji melite foto ndị na-ewepụ wrinkles na ndị ọzọ, ọ bụ ezie na mmetụta nke foto nwere ihu plastik nwere ike ịdị ntakịrị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ọnọdụ a ruo oke.
na foto ndị dị n'okpuru belatara ruo 1200 × 675 nke nwere ezigbo ihe dịka 396KB. Ihe izizi ruru 6 MB ma nwee mkpebi nke 5312 × 2988. Mbelata nke na-adịghị egosi na ogo nke oghere igwefoto nke Galaxy S6 enweghị ike ikwenye.
Ọnọdụ dị ala
Ihe ndekọ vidiyo 1080p 60FPS
Ma ọ bụ egwuregwu vidio ma ọ bụ ọdịnaya multimedia, anyị na-eche ihu otu n'ime ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma iji rie ụdị mgbasa ozi a. Nnukwu ihuenyo ya na nnukwu ọdịyo bụ ihe mgbawa na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Ọ bụrụ n’ịkpọla egwu egwu egwu Hearthstone, ị ga - amata ihe egwuregwu pụtara na Galaxy S6.
Naanị ihe ngosi na ihe -enye gị ohere na-uru nke ya ngwaike na-enwe a ìgwè nke egwuregwu na-arịwanye elu na-arịọ maka ihe onwunwe ndị ọzọ, yabụ n'echiche a, a ga-ekpuchi gị nke ọma afọ ole na ole.
A katọrọ Galaxy S6 maka enweghị ike ịgbanwe batrị na enweghị kaadi micro SD. Abụọ n'ime àgwà ọma ya na mbipụta ndị gara aga yana nke Samsung mechara kpebie iwepụ. Site na nsụgharị ndị a dị iche iche na 32/64 GB, eziokwu bụ na anyị ga-enwe ebe nchekwa dị n'ime iji chekwaa ụdị ọdịnaya niile dị ogologo oge, mana n'ezie, ndị ejirila itinye nchekwa nke microSD ga-emerịrị tufuo ya.
Enwere ike ikwu ọtụtụ ihe dị mma banyere Galaxy S6. Igwefoto ya buru ibu, iko ya laghachi, bezels nwere oke mma, ihuenyo ya na mkpebi QuadHD, ụda ya dị egwu ma ọ bụ interface nke na-agagharị n'ụzọ zuru oke na nke na-aga n'ihu na-enye nnukwu agha na Touchwiz, mana ihe m bi na ya bụ nchekasị ndị ahụ Samsung ga-emecha weta Galaxy S ọhụrụ nke ga-enye mmetụta ndị ọzọ mgbe ị nwere ya n'aka gị, ka anyị gaa. ọ gafeela.
Mmetụta ndị a dị oke mkpa, ebe ọ bụ na niile nke obere àgwà, na njedebe ọ na-eduga gị ka ị na-eche ma na-eche na ị nwere nnukwu ekwentị n'aka gị. Nsonaazụ nsonaazụ bụ na ee, Samsung ewerela ezigbo ọpụpụ n'ọpụpụ ahụ n'ihe bụ mbipụta ndị gara aga nke Galaxy S nke na-etinyekwu ihe maka plastik, ihe na-agbakọ na-echeghị na anyị chere ihu nnukwu ekwentị ahụ dị elu na anyị Ọ na-efu otu ogwe aka na ụkwụ.
Ọ bụ ezie na ụdị nke a na those 849 na 32GB ga-etinye ọtụtụ azụ na ọ bụ ezie na nloghachi ahụ dị ọtụtụ, ọ ka ga-echebara echiche. Karịsịa maka ndị ahụ dị arọ nke na-adịghị enye ogo kachasị elu na njirimara ya niile nke Galaxy S6 ihu na-eme, mana maka ahụmịhe dị elu nke gam akporo ha na-eje ozi ọtụtụ.
N'ikpeazụ, nnukwu ekwentị m nwere olileanya na ọ bụ ndị isi maka ọbụna mma Samsung smartphones.
Samsung Galaxy S6 ihu
Nnukwu igwefoto ya
Omume dị oke elu n'ụzọ niile
Ihuenyo ihu ya na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche
A dị iche iche imewe akpatre
Ọnụ ya dị elu
Ọ na-enweghị batrị ịnụ ụtọ ya n'ụzọ zuru ezu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha nke Samsung Galaxy S6 ihu, smartphone nke mgbanwe maka onye na-emepụta Korea
T_T Achọrọ m ya 🙁
E nwere mmadụ abụọ n'ime anyị: =)
Daalụ Toni! Eziokwu bu na achoghi m ime nyocha ngwa ngwa. Ọ na-amasị m ịnweta ya kwa ụbọchị ma ọ bụrụhaala na m nwere ike, ọbụlagodi na ọ ga-ewe obere oge iji malite, mana nke ahụ bụ otu ị si ejide ihe mmetụta nke ekwentị na-enye gị, nke na njedebe bụ ihe dị mkpa.
5.1.1 Enweghi m ohere inwale ya ma site na ihe igwa m bu ihe ojoo karie. Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m hapụrụ ọchịchọ ịnwale ihe ngwaike S6 ahụ dị ebube na ezigbo Lollipop Android!
Samsung wepụrụ nsụgharị 128GB nke Galaxy S6 na S6 Edge